UZac Efron wayeka ukuzijonga njengaye | TeraNews.net
UZac Efron akasabonakali njengaye
umbhali UKravetz Pavel Papashwe ngomhla 24.04.2021
Isimboli sesini senkulungwane yama-21, umlingisi waseHollywood uZac Efron wamangaliswa abalandeli bakhe. Okona kuncinci, uninzi lwabalandeli beenkwenkwezi kwimidiya yoluntu lwenza isiphithiphithi ngenxa yotshintsho olungaqhelekanga kwiifoto ezihlaziyiweyo.
UZac Efron uyekile ukufana naye
Yonke le nto yaqala nesibakala sokuba umdlali weqonga wapapasha iindaba zokuba wahlukana nentombi yakhe uVanessa Valladares. Isizathu asichazwanga, kodwa kunokuthiwa ngokuqinisekileyo ngakumbi ngenxa yeeshedyuli zokufota ngokuqhekeka kumazwe ahlukeneyo.
Kunye neendaba, inkwenkwezi yaseHollywood yathumela ifoto yayo. Kwakukulo mfanekiso ukuba i-boom ejikeleze umhlaba jikelele ngeZac Efron yaqala. Ngamafutshane, amabango kumdlali weqonga ajongeka ngoluhlobo:
Umhlathi kaZach uthathe imilo engaphezulu yesikwere ebusweni bakhe. Kucacile ukuba imbonakalo yobuso beSpartan inika isibindi, kodwa ngokukhawuleza ukutshintsha ukumila kobuso kunokwenziwa kuphela ngotyando.
Umdlali weqonga wazuza ubunzima bemisipha ngokukhawuleza kwaye wazenzela isiqabu. Oku kungaphaya kwamandla eengcali. Ungathethi ngabadlali ngeeshedyuli zabo ezixakekileyo kunye nokutya okutyayo imini yonke.
Khuselo lweGcisa laseHollywood elipholileyo elivela kuMhlanguli uMalibu
Kunye nezimvo ezingalunganga malunga notshintsho kwinkangeleko yehollywood, unokufumana uphononongo oluqinisekileyo. UZac Efron ubonakala epholile ngokwenene. Ngeempawu zobuso ezinjalo kunye nomzobo, ungabanga indima ephambili kuyo nayiphi na i-movie yesenzo.
Umdlali weqonga ngokwakhe uyakuphepha ukuphendula imibuzo ngongenelelo lotyando. Ngapha koko, ayinamsebenzi. Ngapha koko, umntu ngamnye ungumgwebi wekamva lakhe. Akukho namnye kubalandeli onelungelo lokugweba uZac Efron. Isaci esinye silungile apha - "Kulula ukubona isibi esisesweni lomnye umntu, kodwa ayizukuphelela ukujonga isigodo esikwiliso lakho." Sinqwenela uZach okona kulungileyo kule projekthi intsha, awayeyiguqulele kanobom wangumntu okhohlakeleyo.
MINI PC Beelink GKmini 8/256 nge Windows 10 - isishwankathelo
Zeziphi iziselo ezibandayo zokusela kubushushu behlobo
IiTV ezibukhali -I-4K kunye ne-Bezelless DL kunye ne-DN Series
Kukuphi okungcono ukuthenga iTV-ngaphandle okanye ngaphandle kwe-Smart TV
Uyilo lwangaphakathi- kutheni ungenako ukulungisa ngaphandle koyilo
I-G50S-ulawulo olukude lweTV-BOX: ukujonga ngokubanzi, ukubonakala
Yintoni oza kuthatha nayo xa unyuka: uluhlu lwezinto ezibalulekileyo
Windows 11 - Iimfuno zehardware zinokungcwaba inkqubo kwi-bud
I-Apple iPhone SE 2022 inokuphinda ikamva le-Mini Mini
INetflix - Sele sinababhalisile abangama-200
Ukuvuselelwa kweHyundai Santa Fe 2018: chic ngesiKorea
Iiseti zeenkqubo zomdlalo wamanqindi weTV: uphononongo, iingcebiso
JBL Charge 4 - isithethi esikhulu ngePower Bank